And if you look care - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: and if you look carefully , you can see (Englisch - Burmesisch)
မာကျောသည့် မျက်နှာပြင်များကို ဆေးကြောသုတ်ပစ်ပါ၊ သင့်ထိုင်ခုံမှာ သားရေသားဖြစ်ပါက ထိုင်ခုံကိုလည်း သုတ်ပါ။
ထို့ကြောင့် တတ်နိုင်ပါက သွားမည့်နေရာသို့ တိုက်ရိုက်ရောက်သည့် လေကြောင်းလိုင်းကိုသာ လက်မှတ်ဖြတ်ပါ၊ ထိုသို့မတတ်နိုင်ပါက မည်သည့်နေရာသို့ ချိတ်ဆက်ရမည်ကို သေသေချာချာစဉ်းစားပါ။
At petrol/gas stations, use gloves or wipe down the handle withadisinfectant wipe if you can.
ဓာတ်ဆီ/ဓာတ်ငွေ့ဆိုင်များတွင် လက်အိတ်များ အသုံးပြုပါ သို့မဟုတ် တတ်နိုင်ပါက ပိုးသတ်အဝတ်စဖြင့် လက်ကိုင်ကို ပွတ်သုတ်ချပါ။
သင့်နိုင်ငံသို့ ပြန်လမ်းကို ရှာမရနိုင်ပါက အနီးဆုံး သံရုံး သို့မဟုတ် အကူအညီအတွက် ကောင်စစ်ဝန်ရုံးသို့ ဆက်သွယ်ပါ။
You can abort the installation if you select 'no'.
Connecting in an affected area may lead to entry restrictions later on, and if you've been in an affected area recently some countries won't even let you change planes.
ရောဂါကူးစက်နေသည့် ဒေသတစ်ခုတွင် လေယာဉ်ပြောင်းစီးခြင်းသည် နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ခြင်းများနှင့် ကြုံရနိုင်ပြီး အကယ်၍ သင့်အနေဖြင့် မကြာသေးမီက ကူးစက်မှုဖြစ်နေသည့် နေရာဒေသတစ်ခုတွင် ရှိခဲ့ဖူးပါက အချို့နိုင်ငံများတွင် သင့်ကို လေယာဉ်ပြောင်းစီးရန်ပင် ခွင့်ပြုလိမ့်မည် မဟုတ်ပါ။
ခရီးသည် အုပ်စုတစ်စုသည် ရောဂါဖြစ်ပွားမှု ပြင်းထန်သည့် ဒေသနှင့် ပတ်သက်နေပါက လေယာဉ်အမှုထမ်းများအနေဖြင့် ၎င်းတို့အား ကျန်ခရီးသည်များနှင့် ဝေးရာနေရာတွင်ထားနိုင်သည်။ (ထို့ပြင် အကယ်၍ သင်သည် များမကြာမီက ကူးစက်မှု မြင့်မားသော ဒေသတွင် ရှိနေခဲ့ပါက ထိုအကြောင်းကို လေယာဉ်အမှုထမ်းများအား ပြောပြရန် ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ)။
t**** (Englisch>Schwedisch)maksud marble (Englisch>Malaysisch)zone meaning (Englisch>Tagalog)antica residenza patrizia cena cucina tipica (Italienisch>Englisch)i _____ hamlet last year (Englisch>Russisch)oh buti naman nag charge kana (Tagalog>Englisch)ammucchiati (Italienisch>Spanisch)o my beautiful angal you busy (Englisch>Portugiesisch)bangla bolte paro (Bengali>Englisch)mother teresa in tamil storey (Englisch>Tamilisch)estoy al la mi casa (Spanisch>Englisch)you are the best mom anyone could ever ask for (Englisch>Tagalog)maine suna hai tere baare me (Hindi>Englisch)scio vitam brevem esse (Latein>Englisch)kalathin arumai (Englisch>Tamilisch)magkita tayo sa korte (Tagalog>Englisch)full house (Englisch>Walisisch)tödlicher (Deutsch>Vietnamesisch)civet cat (Englisch>Tamilisch)hubiesen estado (Spanisch>Chinesisch (Vereinfacht))unternehmensstruktur (Deutsch>Englisch)naghiwalay na kame (Tagalog>Englisch)per orbem terrarum (Latein>Französisch)namulat (Tagalog>Englisch)nagatan (Cebuano>Englisch)